JEREO: Netflix Mitete Teaser ho an'ny Thriller 'Clickbait' Mametraka ny famotsorana aogositra
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly JEREO: Netflix Mitete Teaser ho an'ny Thriller 'Clickbait' Mametraka ny famotsorana aogositra
by Waylon Jordan Jolay 20, 2021 2,440 hevitra
Netflix ny clickbait, andian-dahatsoratra voafetra voafaritra ho famotsorana Aogositra 25, 2021, dia nandatsaka ny teaser ofisialy voalohany ary tsara be toa izany!
Avy amin'ny synopsis ofisialy:
Nick Brewer (Adrian Grenier, Ny Devoly dia mitarika an'i Prada) dia ray, vady ary anadahy be fitiavana, izay indray andro tsy hita tampoka ary manjavona miafina. Nisy horonantsary niseho tamin'ny Internet an'i Nick nokapohina mafy nitana karatra izay manao hoe “Manararaotra ny vehivavy aho. Amin'ny fahitana 5 tapitrisa dia maty aho ». Fandrahonana sa fibabohana izany? Sa izy roa? Amin'ny maha-rahavaviny (Zoe Kazan, Marary Be) sy ny vadiny (Betty Gabriel, Mivoaha) maika hitady sy hamonjy azy, manala sarona Nick izy ireo izay tsy fantany akory. Andian-dahatsoratra voafetra misy fizarana valo voalaza amin'ny fomba fijery mihodinkodina, clickbait dia mampientanentana sy mampientam-po amin'ny tsatokazo avo lenta izay mijery ny fomba fampiroboroboana ny filatsahan-tsika mampidi-doza indrindra sy tsy voafehy amin'ny vanim-potoanan'ny media sosialy, ary manambara ireo fahatapahana mihamitombo hatrany izay hitantsika eo amin'ireo olona virtoaly sy tena fiainana.
Ny andiany dia nosoratan / noforonin'i Tony Ayres (Glitch) sy Christian White (vakoka) miaraka amin'i Brad Anderson (Session 9) mitarika araka ny IMDb.
Ny teaser dia manome antsika ampy hialana amin'ny filan'ny nofo fotsiny, ary eto izahay rehetra! Topazo maso eto ambany, ary ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny hevitra!